दुवईमा भएका श्रीमानलाई नेपालबाट श्रीमतीको संदेश (भिडियो हे’र्नुहोस)
Homeसमाचारदुवईमा भएका श्रीमानलाई नेपालबाट श्रीमतीको संदेश (भिडियो हे’र्नुहोस)
सबै कुरा नबु’झि बिवाह गर्न हता’र गर्दा परेको समस्याले एक महिलाले दे’ह त्या’गको प्रयास गरेकी छन् । मेरो विवाह भएको छैन । म अविवाहित हुँ भनेर युवतीसंग न’जिकिए । उनीहरु बीच प्रेम भयो । युवती प्रेममा परिन् । उनीहरुले काठमाडौ आएर पशुपतिनाथ मन्दिरमा वि’वाह समेत गरे । तर अहिले ति युवकले उनलाई श्रीमती स्वी’कार गरेनन् । अहिले एउटा सानो सन्ता’न पनि छ । तर उनले श्रीमती त स्वीकार गरेन’नन् छोरालाई सन्तान पनि स्वीकार ग’रेनन् ।
झापाको कन्काइ नगरपालिका ९ मा भएको यो घ’टनाले यि युवतीको जिवन अहिले बिचल्ली’मा परेको छ । काठमाडौमा लगेर विवाह गरे, सन्तान जन्मियो अहिले उनी फेरी झापा आएर ब’सेकी छन् । श्रीमानले धो’का दिएपछि अहिले ति युवती मिडियामा आएकी छन् । कमला भुषाल नाम बता’उने ति महिलाले आफुलाई नहे’रे पनि सन्तानलाई अधिकार दि’लाउन लागेकी छन् ।
दुई वर्ष देखि मलाई यता न उता पारेर बिच’ल्ली बनाए, फोन गर्दा पनि चोकमा गएर मागेर खा भनेर ज’वाफ लगाउँछन्, उनले भनिन्, उनी साउदीमा छन् । उनले आफु ब्युटी पार्लर सिक्थिन् । त्यही बेलामा उनीहरुको भेट भयो । विवाह भएको उनीहरुबीच औप’चारीक प्रमाण छैन । धेरै समय उनीहरु सं’गै बसे । त्यसवाट छोरा जन्मियो । पशुपतिमा दुई जनाले मात्र वि’वाह गरेका थिए । त्यसको प्रमाण आफुसंग न’भएको युवतीको भनाई छ ।
त्यती बेला म संग मोवा’इल थिएन, उनी आफै फोटो खिचेका थिए तर अहिले त्यो फोटो पनि डि’लिट गरेका छन्, उनले भनिन् छोरालाई मेरो हो भनेर स्वी’कार गरेकै छैनन् । गल्ती हामी दुवैले गर्र्यौ त्यसको स’जाय मेरो छोरालाई किन दिनु ? दुवई’मा संगै हुँदा पनि आफुले कमा’एको सबै पैसा श्रीमानले नै राखेको बता’उँछिन् । अहिले छोरा विरा’मी हुँदा पैसा दिनु भन्दा पनि दिन्नन् । – इताजा खबरबाट
March 12, 2021 admin समाचार 5518
अमेरिकन आइडलका उप’विजेता अर्थर गनको नेपाली म्युजिक भिडियो कागबेनी सार्व’जनिक भएको छ ।अर्थर गनले बिहीबार आफ्नो यूटुयुब च्यानलबाट उक्त म्युजिक भिडियो सार्व’जनिक गरेका हुन। गीतमा शब्द र स्वर उनकै रहेको छ । उनले सन् २०१८
October 21, 2020 admin समाचार 12521
गिरिजाप्रसाद कोइ’रालाकी छोरी सुजाता कोइरा’लाले नेपालमा भएको आफ्नो ‘अन्तिम’ सम्पत्ति पनि बिक्री गर्न लाग्नु’भएको छ । विराटन’गरमा आफ्नो पिता गिरि’जासँग प्राप्त पैतृक सम्पत्ति उहाँले पहिले नै बिक्री गरिसक्नु’भएको थियो । सुजाताले ‘आफ्नो मेह’नतबाट आर्जन गरेको’
शनिको साढे सात ग्रह दशा हटाउन के गर्ने ?
October 3, 2020 admin समाचार 12092
शनि’को साढे सातको दशा कसै’मा एक पटक देखा परेमा यसले निकै ठुलो क्षति पुर्‍’याउने ज्योति’षशास्त्रीहरु बताउँछन् । बिरलै’लाई मात्र यसले लाभ गर्छ । त्यसैले शनि’को साढे सात दशाको दाेष निवारण गर्न विभिन्न शा’स्त्रीय विधि अपनाउनुपर्छ